Microsoft Exel - MYSTERY ZILLION
June 2011 edited June 2011 in DTP
ပီးတော့တစ်လပီးတစ်ခါလည်းသိချင်တယ် DTP Proတွေပြောပြပါလား
What means Your question?
@aungpyiphyo, can you explain more ? We don't know your current format and it's very hard to tell.
excel sheet တွေ အချင်းချင်း လင့်ခ် ချိတ်ပီးသုံးရတယ်ထင်တယ်.
ကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့ process အလိုက်. လိုချင်တဲ့ format ရအောင် လင့်ခ်ယူရမှာပေါ့။